बढ्दो वजनले हाइपोथायरायडिज्म निम्त्याउन सक्छ | सुदुरपश्चिम खबर
बढ्दो वजनले हाइपोथायरायडिज्म निम्त्याउन सक्छ
आधुनिक समयमा थाइराइड एक सामान्य समस्याको रुपमा विकास हुन थालेको छ । थाइराइड धेरै कारणहरूले हुन सक्छ । यसका प्रमुख कारकहरू जस्तै अटोइम्युन डिसअर्डर, पिट्युटरी रोग, थाइराइड डिस्चार्ज वा आयोडिनको कमी आदि हो । थाइराइडका दुईवटा प्रकार हुन्छन् । एउटा हाइपरथायरायडिज्म हो र अर्को हाइपोथायरायडिज्म ।
एकातिर हाइपर थाइराइडले बिरामीको वजन छिटो घटाउँछ भने अर्कोतर्फ हाइपोथायरायडिज्म भएका बिरामीहरूको वजन छिटो बढ्छ । हाइपोथायरायडिज्म भएका व्यक्तिहरूले वजन नियन्त्रणमा धेरै कठिनाइको सामना गर्छन् । यसलाई अण्डरेटिभ थाइराइड रोग पनि भनिन्छ । महिलाहरूमा हाइपोथायरायडिजम धेरै हुने गर्छ ।
हाइपोथायरायडिजम भनेको के हो ?
आजको समयमा थायराइड एक सामान्य रोग बनिसकेको अवस्था छ । हाइपोथायरायडिज्म तब हुन्छ जब शरीरमा थाइराइड ग्रन्थीले पर्याप्त थाइराइड हर्मोन उत्पादन गर्दैन। महिलाहरू हाइपोथायरायडिजमको बढी खतरामा पर्ने गर्छन् ।
थाइरोइड ग्रन्थी हाम्रो घाँटीको बीचमा रहेको एउटा साधारण ग्रन्थी हो । थाइराइड गन्थी पिट्युटरी ग्रन्थीद्वारा सन्तुलित हुन्छ । शरीरमा पिट्युटरी ग्रन्थीमार्फत नै रक्त प्रवाहको माध्यमबाट हार्मोनहरू बाहिर निस्कन्छन् । हार्मोनको विमोचनबाट शरीरका सबै अंगहरू प्रभावित हुन्छन् । मुटु र मस्तिष्कदेखि मांसपेशीहरू र छालासम्म यसबाट प्रभावित हुन्छ । यस तरिकाले थाइराइड हार्मोनको मुख्य उद्देश्य भनेको शरीरको मेटाबोलिजम नियन्त्रण गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा जब व्यक्ति थाइराइडले ग्रस्त हुन्छ, उसको शरीरको मेटाबोलिज्म नियन्त्रण हुँदैन । मेटाबोलिक नियन्त्रणको अभावका कारण शरीरको वजन घट्ने वा बढ्ने हुन्छ ।
हाइपोथायरायडिज्मको टीएसएच तह के हो?
पिट्यूटरी ग्रन्थीले हाम्रो शरीरमा हार्मोन उत्पादन नियन्त्रण गर्छ । पिट्यूटरी गन्थीको कार्य थाइराइड उत्तेजक हार्मोन यानी –(((((टीएसएच) बनाउनु हो । टीएसएचले थाइराइड ग्रन्थीलाई बताउँछ कि कुन मात्रामा थाइराइड हर्मोन बनाउने भनेर । यदि टीएसएचको स्तर असामान्य रूपमा बढ्दै जान्छ भने तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं अण्डएक्टिभ थाइराइड वा हाइपोथायरायडिज्मबाट प्रभावित हुनुहुन्छ ।
यो समस्याको मुख्य लक्षण भनेको नै छाला संवेदनशील हुन्छ । यस कारणले व्यक्ति चिसो र अधिक तातो महसुस गर्ने गर्छन् । यसका अन्य लक्षणहरु निम्नानुसार छन् ।
–जोर्नीमा हुने दुखाइ
–अनियमित मासिक धर्म
–कमजोर स्मरण क्षमता
सही आहार सम्बन्धी नियमले थाइराइडको समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
हाइपोथायरायडिजमका बिरामीहरूको लागि डाइट प्लान
बिहान खाली पेटमा औषधि लिन सकिन्छ । यस्तो औषधि तातो पानीका साथ लिन सकिन्छ । आधा घण्टापछि ४÷५ वटा ड्राइफ्रुट्सका साथ दालचिनीको पानी पिउनुहोस् ।दालचिनीको पानी तयार पार्नको लागि एउटा दालचिनीको टुक्रामा एक किलास मानी राखेर उमाल्नुहोस् । यसमा आधा इन्च जति दालचिनी राख्न सकिन्छ । यसलाई करिब ५ मिनेटसम्म उमाल्न सकिन्छ ।
बिहानको ब्रेकफास्ट – बिहानको ब्रेकफास्टमा १ कचौरा तरकारी वा अण्डा खानुहुन्छ भने दुईवटा अण्डा अचारसँग खान पनि सकिन्छ ।
मध्यम आहार – यस समयमा तपाईं मौसमी फलहरू खान सक्नुहुन्छ । सुन्तला जस्तो चीज जाडोमा खान सकिन्छ । यस समयमा तपाईंले एक कचौरा मेवा, सुन्तला वा केरा खान सक्नुहुन्छ ।
लन्चमा– आफैँले तयार पारेको दुईवटा रोटी, एक कचौरा हरियो तरकारीसँग दही लिन सक्नुहुन्छ । साँझमा खाना खाने संस्कार भएको ठाउँमा खाना खान पनि बाधा पर्ने छैन ।
रात्रिभोज –राति हल्का खाना खानुपर्छ । यस खानामा तपाईं तरकारीको साथ खिचडी पनि लिन सक्नुहुन्छ । यससँग एक प्लेट सलाद पनि खान सकिन्छ ।
रातमा सुत्ने बेलामा एक गिलास बेसारलाई दूधसँग खानुपर्छ । यसले तपाईंको हड्डीलाई राम्रो गर्छ । थाइराइडका बिरामीहरूको हड्डी कमजोर हुने गर्छ । यस अवस्थामा, क्याल्सियम युक्त आहार लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार